Bir_Nepali 254 days ago
sexy in haku patasi 254 days ago
Jac Koff 253 days ago
underwear 102 days ago
Visitor from DE is reading GIRLFRIEND HO TO AIISAA
Visitor from GB is reading cool pokharel
[VIEWED 8842 TIMES]
Last vote for Bennedict from US
Posted on 05-12-20 2:52 PM [Snapshot: 610] Reply [Subscribe]
Bennedict ब्रो हरे प्रभु म कहाँ बाट शुरु गरुम?
त्यस्लाई बर्गर होइन Egg Benedict भन्छ, तपाईं नाम राख्ने तर मतलब नबुझ्ने?
हरे भैगो तपाईं सित के किच किच गर्नु, माया पो लाग्यो, हस त नमस्कार .
Posted on 10-02-20 4:42 PM [Snapshot: 4389] Reply [Subscribe]
म अन्डरवेरको अभतार रे ! 😱
थुक्क ! 😂
मेरो त् एउटै मात्र अभतार छ है - नाज ब्रो ! 😎
साला साझाको एडिक्ट भए नि उ बेला मलाइ साझामा ब्याण्ड गरिदिंदा धरी मैले आर्को अभ्तार लिएर सांझा छिरेन ! साला पापी एड्मिन्ज्युले एति धरी सम्म पनि गर्न भाको थियो कि मेरो साझामा अस्तित्व मेट्टाउन मेरो अभतार "नाज" लाइ रिप्लेस गरिदिन भएर तेस्को साटो "ब्याण्ड इउजर" राख दिन भाको थियो ! बिचरा एड्मिन्ज्युलाइ कायल नै बनाका थिए साझाका तथाकथित बुद्धिजीवी भनाउदो र "डू गूडर" हरुले मलाइ किन ब्यान नगरेको भनेर ! फेरी मैले साझामा आजसम्म कसैलाई तथानाम बोलेको पनि छुइन ! मे बि एक खेप "जोन गाल्ट" ब्रोले मलाइ केहि नराम्रो भन्न हुँदा उन्हाको औसधी उन्हालाई नै चखाइ देको थिए ! तेस बाहेक त् म मोस्टली साझा बासिहरुसंग राम्रै रुपमा पेश भाको छु जस्तो लाग्छ ! तै पनि किन हो किन सबै साझाबासि मसंग रुस्ठ हुन्थे ! खैर एड्मिन्ज्युले मलाई अँब्यान गरिदिन भएर मेरो अभतार "नाज" पनि रिस्टोर गरी दिन भाकोमा मुरी मुरी धन्यबाद ! 🙏